ELISA Kit, Elisa Test, ELISA nnwale, enzyme Immunosassay - Donglin Sci & Tech
ụlọ ọrụ yinye
Anyị tumadi-elekwasị anya na mmepe na mmepụta nke enzyme immunoassay achọpụta ọrịa reagents, laabu Usoro mmepe na ọrụ dị ka nke ọma dị ka kọmputa software mmepe.
Anyị ji obi ụtọ akpọ gị òkù isonyere anyị na anyị nwere mmasị na-na-okwu imekọ ihe ọnụ na ị. All gị n'ụlọnga na OEM na-nabatara.
Ike nke ọnụ ọgụgụ
Anyị ụlọ ọrụ nwere 3 alaka: Shanghai, Beijing na Canada ụlọ ọrụ na HQ na Wuxi. Anyị nwere ahịa ngalaba, ngwaahịa ngalaba, nnyocha na mmepe ngalaba, teknuzu ngalaba na lọjistik.
Wuxi Donglin Sci & Tech Development Co., Ltd., Bụ a emeputa na soplaya nke ndu reagents maka ndụ sayensị, headquartered na sinik ebe n'akụkụ Taihu Lake.
Tọrọ ntọala na 1997, anyị ụlọ ọrụ malitere azụmahịa dị ka ihe OEM eweta ọrụ nke ELISA ngwa iwu gafee ụwa.
Na 2013, anyị na-na-ulo oru anyị onwe ika DLdevelop. Anyị ipuiche n'ichepụta ELISA ngwa iwu na-ekenye Asia, Oceania, Africa, Europe na America. Na na mgbasa nke azụmahịa, anyị melite esenidụt alaka na Canada, a anụ ụlọ onye na Shanghai.
Òké Activin A (ACVA) ELISA Kit
Human Wingless Type MMTV Integration Site Famil ...
Human nsụkọta Type m Alpha 2 (COL1a2) ELISA Kit
Òké Glutamate Dehydrogenase 1 (GDH) ELISA Kit
Human Ụyọkọ Of iche 40 Ligand (CD4 ...
Rat Transglutaminase 2, anụ ahụ (TGM2) ELISA Kit